Online Marg | माधव नेपालको बहिर्गमनपछि एकमना पार्टी लिएर चितवन झरेका ओलीमाथि यो आइलाग्यो ? देशभरका एमालेहरु बने चिन्तित !
माधव नेपालको बहिर्गमनपछि एकमना पार्टी लिएर चितवन झरेका केपी ओलीमाथि अर्को बज्रपात भएको छ । आफ्नै समूहभित्र पनि उपसमूह जन्माएर ओली राजधानी फर्कंदै हुुन् ।
महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा सर्वसम्मत गराएर निर्विकल्प अध्यक्ष बन्ने ओलीको रणनीति सफल हुन सकेन । अध्यक्षका प्रत्याशी उनी स्वयंले आफूसहितलाई समेटेर नयाँ केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरे । लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत उनले प्रयोग गरेको अतिरिक्त अभ्यास पूर्णरूपमा सफल हुन सकेन । बरु उनको ‘नजरमा’ परेको भनेर आशावादी नेताहरू नै दुःखी भएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी नेम्वाङ ओलीको निर्णायक दबाबपछि उपाध्यक्षमा बस्न तयार भए । उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरूले ओलीसँग पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । यद्यपि नेम्वाङले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय स्वीकार गरेको बताए । ‘मेरो गुनासो अध्यक्षलाई भन्छु तर सर्वसम्मतिले गरेको मान्छु भनेको थिएँ, अध्यक्षले गृहकार्य गरेर नाम सुनाउनुभयो, हलले अनुमोदन ग¥यो, निर्वाचनमा गएको भए स्वाभाविक रूपमा चुनाव लड्थें,’ उनले भने । ओलीलाई संकटको समयमा आलोचना खेपेर पनि साथ दिँदै आएका नेम्वाङले जिम्मेवारीमा भने प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि ओलीले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेको सूचीमा अटेनन् । जुनियर नेता केन्द्रीय कमिटीमा पर्दा आफू नसमेटिएकामा उनी असन्तुष्ट छन् । तर अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न आग्रह गरेपछि स्वीकार गरेको उनले बताए । ‘अध्यक्षले प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्न भन्नुभएको छ तर यहीं (केन्द्रमा नै) दिएको भए हुन्थ्यो, प्रदेशमा काम गर्ने मान्छे भएनन्, तपाईंले राम्रोसँग काम गर्दिनुप¥यो भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रोटोकलमा तल परे पनि पार्टी कामका हिसाबले प्रदेश महत्त्वपूर्ण हो । तपाईंले हेरिदिनुप¥यो भनेर पार्टी अध्यक्ष, महासचिवलगायतका नेताले भन्नुभयो । मैले इन्कार गर्न सकिनँ । ठीकै छ नि त भनेको हुँ ।’
राना आफ्नो नाम सूचीमा नपरेपछि रुँदै बन्दसत्रबाट बाहिरिन् । हलबाहिर भएका नजिकका प्रतिनिधिले उनलाई सम्झाउन हम्मे प¥यो । ‘जीवनभर केपी ओलीको गुटका हौं । पश्चिममा संगठन नै थिएन । हामीले बनाएका हौं । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी कमरेडलाई प्रचार गरेर जिताएको हो । मलाई राख्छु भनेका थिए तर राखेनन्,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘बर्दिया जिल्लामा सिनियरमै पर्छु । जिन्दगीभर पार्टीका लागि काम गरें । यस्तो पक्षपात गर्दा चित्त दुख्दैन र ?’
ओलीको सूचीमा पुराना नेता गोमा देवकोटा, राधा ज्ञवाली र उमा कोइरालाको नाम पनि अटाएन । जबकि तीनै जना पदाधिकारीका आकांक्षी थिए । ‘मैले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेकी थिएँ तर अहिलेको नेतृत्व सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्दै आएकी थिएँ । मलाई केही नेता कमरेडहरूले तपाईंले उम्मेदवारी नदिँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । अहिले हामी सहमतिको वातावरण बनाइरहेका छौं, हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो,’ ज्ञवालीले भनिन्, ‘त्यस हिसाबले मैले उपाध्यक्षमा मनोनयन गरिनँ । केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनका लागि केही कोटा हुन्छन् । त्यसमा स्वतः वरिष्ठबाट मलाई छुटाउनुहुन्न भन्ने विश्वास छ ।’
विधान संशोधन गरेर १९ पदाधिकारी बनाउँदा उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिवमा पद्मा अर्याल समेटिएका छन् । उपमहासचिवको आकांक्षी विन्दा पाण्डे पनि पदाधिकारीमा परिनन् । सीता पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पनि पदाधिकारीका दाबेदार थिए । ‘विधान बाध्यकारी नभए पनि व्यवहारमा पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिला ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेका थियौं, त्यो भएन,’ पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘करिब करिब पुरानै नेता पदाधिकारीमा छन् । अब स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बन्छ । अवस्था देख्दा सम्भवतः त्यसमा पनि महिलाको एकतिहाइ संख्या पुग्छ भन्नेमा हामीलाई शंका छ ।’
महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विधि प्रक्रियाले विगतको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गुमाएकामा ओलीनिकट नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । ‘एमालेले विगतमा जुन तरिकाले सामाजिक पुँजी निर्माण गरेको थियो, कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने आरोपलाई खण्डन गरेको थियो, त्यसलाई यो महाधिवेशनले समाप्त पार्न खोजेको देखियो,’ एक नेताले भने, ‘आगामी २० वर्षसम्म एमालेले यही विषयमा जवाफ दिइरहनुपर्नेछ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।